Ururka Samafalka ee ubax Faundation oo Gurmad Raashin ah Gaarsiiyay Dad ku dhaqan cdeegano Hoostagga deg. Balad – Balcad.com Teyteyleey
Ururka Samafalka ee ubax Faundation oo Gurmad Raashin ah Gaarsiiyay Dad ku dhaqan cdeegano Hoostagga deg. Balad
Ururka Samafalka ee ubax Faundation ee ka diiwaan gashan dalka seweden ayna ku mideysan yihiin Qaar ka mid ah Haweeynka Soomaaliyeed eek u dhaqan dalkaasi Sweden Gaar ahaan caasimadda labaad ee Gotembeage ayaa gaarsiiyay Raashin Gurmad ah oo mucaawino ah dadka ku dhaqan deeganadaasi ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe Gaar ahaana Degmadda Balcad.
Raashinkaan Gurmadka ah oo ay dadkaasi u soo Diray Ururka Samafalka ee Ubax Faundation ayaa waxaa ay marka hore u soo diray Lacag dhan $1000. Doolar oo ay ku soo hagaajiyay Wakiilka Ururkaasi ee magaaladda Muqdisho, ayaa waxaa loogu iibiyay Raashin Iskugu jiray Bariis, Bur,Saliid,Sonkor iyo Timir, waxaana la gaarsiiyay Qoysas gaarayay in ku dhaw 40 Qooys oo ku Nool deegaanadaasi oo ay asiibtay Abaarta iyo macluusha haahday ee xiligaan ka jirta Goboladda dalka Soomaliyeed, haba sii kala darnaadaanee. Waxaana labadii Qoskiiba la siiyay 25, Bur ah,25 bariis ah,caag sedex litir oo saliid ah, 4 kiilo oo timir ah iyo afar Kiilo oo sonkor ah.
Dadkaan oo iskugu jiray xoolaleey iyo Beeraleey ayaa xiligaan haysan wax xoolo ah iyo weliba wax beer uga soo go,ay midna waxayna xoolohoodii ku baxeen abaata haasay ee xiligaan soo foodsaartay shaciga Soomaliyeed, waxaayna haatan taagan yihiin Guryo cidlla ah mana haystaan wax xoolo ah marka laga reebo degaagmooyee ama dooro.Caasha Munna,Farxiyo Tooxoow,iyo Faadoma eelaay ayaa waxaay xiligaan ku jiraan gurmad guud oo ay Shacbiga Soomaliyeed Gar gaar dhaqaale ugu soo uruurunaayaan dadka ay abaaraha iyo Gaajadda ku habsatay ee Soomaaliyeed, waxaayna habiin iyo maalin u Make sure that you check our allegra offers, because you can get it for only 0.46 USD at our store! taagan yihiin gacansiita walaalahoodda soomaaliyeed iyagoo aanan marna u eegeeynin Qof gaar ahaaneyd, waxayna haatan gurmad xoog leh ugu jiraan sidii bulshadeena soomaliyeed looga gacan siin lahaa dhinaca abaarta iyo macluusha, waxayna isku barbar wadaab biyo dhaamin iyo gargar raashin ah oo la gaarsiinaayo goobaha ay ku dhufatay abaata ee Goboladda iyo degmooyinka dalka Soomaliya.
Qoysaskaan la gaarsiiyay Raaashinka gargaarka ah oo iskugu jiray Rag iyo Dumar ayaa waxaay siweeyn ugu farxeen markii loo qeeybiyay isagoo ay wejiyadooda aad ka dheehaneysid farxadda saameeyay waxaay ka mahadceliyeed sida loogu soo gurmaday isagoo ilaahna uga baryay xubnihii iska xilsaaray in ay helaan gurmadaasi ilaah ka abaalmariyo bedelkeedana wax kheyr leh ilaah ugu bedelo, iyagoo codsi dheerna u jeediyay walaalaha kale ee muslimiinta ah ee Soomaliyeed in ay u soo fidiyaan gargaar kale si ay ugasamata baxaan Abaarta iyo gaajadda ku dhufatay Xiligaan shacbiga soomaliyeed meel kasta oo uu joogo.
Ma ahaan markii ugu horeysay ee Ururkaan Ubax Faodation oo Gargaar u fidiyo shabiga Soomaaliyeed waxaana uu isla todobaadkaan gudihiisa Biyo dhamin ka sameeyay Qaar ka mid ah degaanadda Hoostagga Degmadda Jowhar ee Gobolka shabeelaha Dhexe Gaar ahaana Deegaanadda webiga ku teeysan, kadib markii ay u soo direen Lacag Dhan $500. Doolar oo loogu sameeyay bio dhaamin laba maalmood ah.
Wariye ku dhaawacmay Qarax loogu xiray gaarigiisa Saakay
Ciidamada Milateriga xoogga dalka oo gadood ka sameeyay magaalada Muqdisho